पीपीएल – पोखराको जितमा तीन नायक
- नेपाली सन्देश शुक्रबार, कार्तिक ९, २०७५ , 6.3K जनाले हेर्नुभयो
पोखरा (हाम्रो खेलकुद) – पोखरामा आजबाट सुरु भएको पोखरा प्रिमियर लिग (पीपीएल) मा घरेलु टोली पोखरा पल्टनले विजयी सुरुवात गरेको छ । उद्धघाटन खेलमा विराटनगर टाइटन्सलाई ५८ रनले पराजित गर्दै पल्टनले प्रतियोगितामा सानदार सुरुवात गरेको हो ।
पोखरा रंगशालामा टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको पल्टनले निर्धारित २० ओभरमा मात्र ३ विकेटको क्षतिमा १ सय ९७ रन बनाएको थियो । १ सय ९८ रनको लक्ष्य पक्ष्याएको विराटनगर ८ विकेट गुमाउदैँ निर्धारित ओभरमा मात्र १ सय ३९ रन बनाउन सक्यो । पोखरालाई सहज जित दिलाउन यी ३ खेलाडीले उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्न सफल रहे ।
पोखरालाई सहज जित दिलाउन विनोद भण्डारीले विश्फोटक ब्याटिङ गरे । सन्दीप लामिछानेले १६.५ बलमा आक्रमक ब्याटिङ गरेका रवी इन्द्रर सिंहलाई ४४ रनमा पेभिलिएनको बाटो देखाएपछि हिटर भण्डारी मैदान प्रवेश गरेका थिए । १८ औँ ओभरमा मध्य गतिका योर्कर फ्याक्न सिपालु बलर जितेन्द्र मुखीयाको पहिलो बलमा चौका र दोस्रो बलमा छक्का प्रहार गर्दै विनोद आफुले सुरुवात देखीनै विश्फोटक ब्याटिङ गर्ने छाँटकाँट देखाएका थिए । तेस्रो बलमा लेग बाई रन लिदैँ आसिफ शेखलाई स्ट्राइक दिएका उनले अन्य तीन बलमा स्ट्राईक पाएनन् ।
१९ औँ ओभरको दोस्रो र तेस्रो बलमा स्पिनर साहव आलमलाई छक्का प्रहार गरेका विनोद त्यतिकैमा रोकिएनन् । अन्तिम ओभरमा दिपेश श्रेष्ठको पहिलो बलमा छक्का र दोस्रो बलमा चौका प्रहार गरे । त्यस्तै तेस्रो बलमा शरदलाई स्ट्राईका दिएका विनोदले अन्तिम बलमा छक्का प्रहार गर्दै इनिङ फिनिसिङ गरे । भण्डारीले मात्र ११ बलमा ५ छक्का र २ चौका प्रहार गर्दै ४१ रनमा नट आउट रहे । विश्फोटक ब्यटिङ गरेका विनोद खेलमा म्यान अफ द म्याच समेत घोषित भए । .
रवी इन्द्रर सिंह
भारतीय मुलका खेलाडी सिंह पोखराको नयाँ पिचमा खुलेर खेले । सन्दीपले साताँै ओभरको पहिलो वलमा आक्रमक ब्याटिङ गरि रहेका ओपनर कुशल भुर्तेललाई आउट गरेपछि तेस्रो नंबरमा ब्याटिङ गर्न मैदान प्रवेश गरेका सिंहले विराटनगरका बलर सामु खुलेर खेले । सुरुवाती ७ बल रक्ष्यात्मक (रोकेर) ब्याटिङ गरेका सिंहले ८ औँ ओभरको अन्तिम बलमा साहव आलमलाई चौका प्रहार गर्दै खुलेर ब्याटिङ गर्ने संकेत देखाए । सिंहले अन्य ३ बल पनि रोकेरै खेले ।
१० औँ ओभरको चौथो बलमा पुष्प थापालाई छक्का प्रहार गरेका उनले पाँचौ बलमा चौका र छैँटौ बलमा छक्का प्रहार गर्दै आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भए । त्यसपछि १४ औँ ओभरको तेस्रो बलसम्म उनि खुलेर खेलेनन् । डबल सिंगल रन लिए । १४ औँ ओभरको पाचौँ र छैटौँ बलमा साहव आलमलाई छक्का प्रहार गरेका उनि १६. ५ ओभरमा सन्दीपको बलमा पुष्प थापाको हातबाट क्याच आउटको शिकार बन्न पुगे । २७ बलमा ४४ रन प्रहार गरेका उनले सम्रगमा २ चौका र ४ छक्का प्रहार गर्दै पोखरालाई विशाल योगफल तयार गर्न उत्कृष्ट ब्याटिङ गरे ।